Saturday June 19, 2021 - 14:17:57 in Wararka by Xarunta Dhexe
BBC-Somali. Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong-un ayaa sheegay in dalkiisa uu u baahan yahay inuu isku diyaariyo "wada xaajood iyo dagaal" lala galo Mareykanka, iyo "gaar ahaan inuu si buuxda isugu diyaariyo iska hor imaad".
Maxaa loo waayay xaaska hogaamiye Kim Jong-un?
Wuxuu sheegay inay u baahan yihiin in "gaar ahaan si buuxda isugu diyaariyaan iska hor imaad, si loo dhowr sharafta dalka iyo danihiisa horumarka iyo madaxa bannaanida", iyo sidoo kale n la "damaanad qaado nabad iyo ammaanka Kuuriyada Waqooyi," sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda ee KCNA.
Kahor doorashadii Mareykana, Biden ayaa ku tilmaamay in Kim uu yahay "tuug", maalmo kahor caleema saarkiisa. Ka dib Kuuriyada Waqooyi ayaa sameysay dhoolla tus militari oo ballaaran kaas oo ay ku soo bandhigtay hub cusub.
Bishii April, Biden ayaa Kuuriyada Waqooyi ku tilmaamay in ay "khatar weyn" ku tahay ammaanka dunida, taas oo sababtay in jawaab caro ah ay ka timaaddo Pyongyang oo sheegtay in hadalkaas uu ka tarjumayo in Biden uu doonayo inuu "sii xoojiyo siyaasadda cadowtinnimada leh" ee ka dhanka ah dalkaas.
Xoghayaha xiirirka Aqalka Cad, Jen Psaki ayaa tiri: "Siyaasaddeenna diiradda ma saari doonto in lagu guuleysto gorgortan, sidoo kalena kuma tiirsanaan doonto dulqaad istaraatiijiyadeed".
Leif-Eric Easley, oo wax ka dhiga Jaamacadda Ewha Womans ee Seoul, ayaa hannaanka Biden ku sheegay in uu yahay mid go'aannada Kuuriyada Waqooyi ka talo gelinaya xulafadiisa, isagoo u maraya hannaanka "diblomaasiyadda".
"Maamulku ma uusan soo bandhigin hannaan faahfaahsan, sababtoo ah wuxuu doonayaa in si aan adkeyn loo wajaho Pyongyang," ayuu yiri.
"Dhanka kale, Washington waxay xulafadeeda la xoojin doontaa hannaanka iska caabbinta, tababarka militariga, iyo difaacyada hubka."
Farriinta isku dhex jirta ee Kim Jong-un ee isu diyaarinta "wada xaajoodka iyo iska caabbinta" waxay ka tarjumeysaa hadallada Madaxweyne Biden, oo qaabka uu Mareykanka u wajahayo Kuuriyada Waqooyi ku sheegay in ay tahay hannaan ku dhisan "diblomaaisyad iyo iska cababin".
Balse hubanti la'aanta farriinta Kim waxay sidoo kale calaamad u noqon kartaa in Kuuriyada Waqooyi ay rajeyneyso in ay dib ugu laabato wada hadal.
Inkastoo Kim Jong-un uu carrabka ku adkeeyay isu diyaarinta "iska hor imaad", wuxuu ka gaabsaday inuu si toos ah u cambaareeyo Mareykanka amaba hadallo kale oo xanaf leh.
Muddada dhowna, faafitaanka COVID-19 iyo cunno yaraanta waxay dalkaasi ku qasbi doonaan inuu xoogga saaro arrimaha gudaha, beddelkii uu xoogga saari lahaa kuwa dibadda.